Hadalki ugu dambeeyey duuliyihi diyaaradda Itoobiya ee burburtay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Jonathan Druion
Image caption Diyaaraddi Boeing 737 Max-8 ee burburtay seddex toddobaad ka hor
Warar dheeraad ah oo ku saabsan diyaaraddii burburtay ee ay lahayd shirkadda diyaaradaha Itoobiya ayaa sheegaya in la helay xog ku saabsan xaaladdi ugu dambeysay ee duuliyaha diyaaradda.
Burburki diyaaradeed ee sababay dhimashada 157 qof oo diyaaradda saarneyd waxaa loo sababeeyey iney diyaaradda cillad habka duulista ah ay la soo deristay kaddibna uu dab ka kacay.
Diyaaradduna markay 137 miitir ay dhulka u jirto ay diyaaraddu billaawday shanqar aan horay looga baran waxayna markiba billawday iney hoos iisu soo deyso.
Sida uu qoray waregeyska Wall Street uu qoray hadalki ugu dambeeyey duuliyaha diyaaradda inta ay burburin uu ku hadlo inuu ahaa "Kor u kac, kor u kac" taasoo loo fasirtay inuu duuliyaha la tacaalayey iney diyaaradda uu kor u qaado ilaa codkiisi ugu dambeeyey raadiyaha laga waayo.
Wargeyska wall street waxay sheegtay iney la xiriirtay dad aad ugu dhaw guddiga baritaanka shilkaasi diyaaradeed ku howlan waxayna sheegeen xogtaasi iney muujineyso "fashilka shilkaasi diyaaradeed ku yimid".
Xoga kale oo horranti toddobaadkan ka soo baxay guddiga shilka baaraya ee Itoobiya iyo Mareykankaba ayaa sheegay xilliga shilka uu dhacayey inuu furnaa habka duulinta koombiyuutarka ee diyaaradda.
Nidaamka duulinta ee MCAS oo cillad ay ku timaaddana waxay si la mid ah diyaaradda Itoobiya ay shil ku keentay diyaaraddii ay lahayd shirkadda diyaaradaha Lion ee Indonesiya oo burburtay bishi October ee sanadki hore.
Diyaaradda Boeing 737 MAX waxay burburtay waxyar un kaddib marki ay ka duushay garoonka Jakarta ee dalka Indonesiya waxaana shilkaasi ku dhintay 189 qof.
Image caption 157-kii qof ee sarneyd diyaaradda Itoobiya shilkaasi ayey ku geeriyeedeen
Shirkadda Boeing waxay iyaduna sheegtay baaritaan ay ku sameeysay diyaaradaha Nooca Boeing 737 Max 8 iney ka heleen cillad dhinac dullimaadka koombiyuutarka cilladdina ay xal u heleen.
Waxayna shirkadda Boeing sida oo kale sheegtay iney dib u eegis ku sameeyneyso tababarrada la siiyo duuliyeyaasha diyaaradahaasi ee heer caalami.
Image caption Guddiga baaraya shilki diyaaradda Itoobiya wax war weli kama soo bixin
Guddiga ay Itoobiya u xilsaartay baaritaanka shilka diyaaradeed waxa sababay waxaa la filayaa iney natiijada baaritaankooda ay shaaciyaan maalmaha foodda nagu soo haya iyada oo ay wasaaradda gaadiidka Itoobiya ay horey u sheegtay iney muddo bil ah ay natiijada baaritaanka ku soosaarayaan.